Public Health Concern चिसो बाट कसरी बच्ने ? कस्ता समस्याहरु आउछन ? कस्ता खानपिन खानुपर्छ ? – Public Health Concern
कसरी बच्ने चिसो बाट
जाडो याम सुरुवात भएको पनी केहि दिन भई सक्यो । बिहानबेलुका निकै चिसो बढ्न थालेकोले यसबाट जोगिनु उपयुक्त हुन्छ । चिसो बढेसँगै जाडोयाममा देखिने रोगहरू पनि देखिने समय सुरु भएको छ । जाडोयाममा विशेष गरि समस्या देखिने भनेको बूढा–बूढी र बालबालिकामा नै हो । बालबालिकामा पनि भर्खर शिशुहरूमा धेरै समस्या देखिने सम्भावना रहन्छ । तर, केही साधारण कुरामा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि धेरै रोगहरूबाट सहजै बच्न सकिन्छ ।
जाडो यामको अर्को मुख्य समस्या भनेको रुघाखोकी हो । रुघाखोकी लाग्नुको मुख्य कारण भाइरल संक्रमण नै हो । भाइरल संक्रमणबाट बच्ने उपाय भनेको रुघाखोकी लागेको मानिससँग दुरी कायम गर्ने । उनीहरूलृ प्रयोग गरेको सामान सकेसम्म प्रयोग नगर्ने नै हो । शरिरलाई न्यानो राख्न सक्यो भने पनि भाइरल संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले समय समयमा तातो तरल पदार्थको सेवन निकै हितकर हुन्छ । जाडोयाममा पानी थोरै मात्र पिउने बानी धेरैमा हुन्छ, जुन अस्वस्थकर मानिन्छ ।
– हातगोडा र ओठ फुट्ने वा छाला फुस्रो हुने समस्या भएकाहरूले मोस्चुराइजर क्रिमको प्रयोग गर्ने ।
जाडो मौसम र खानपान:
l जाडो मौसमलाई फलफूलको मौसम पनि भनिन्छ । यतिबेला घाम ताप्दै सुन्तला, अंगुर, अनार, भोगटे आदि भिटामिन सीयुक्त साइट्रस फलफूल खान सकिन्छ । फलफूलको सेवनले शरीरमा नयाँ ऊर्जा उत्पन्न गर्छ भने छालालाई चम्किलो बनाउने, रेटिनाको कार्यक्षमता बढाउने काम गर्छ । साइट्रस फलफूलमा पाइने हेस्पेरेडिन तत्वले शरीरका खराब कोलेस्टेरोललाई कम गर्ने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने कामसमेत गर्छ ।
l हरियो साग सबै मौसमको सुपर हिरो तरकारी हो । कतिपयमा जाडो मौसममा साँझपख सागसब्जी खाँदा सर्दी, रुघाखोकी लाग्छ भन्ने अन्धविश्वास छ, तर यो गलत हो । भिटामिन ए तथा केयुक्त सागले शरीरलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ । जाडोमा विशेषगरी मेथी, बेथे, पालक तथा तोरीेको साग, ब्रोकाउली एवं धनियाँ खानु उपयुक्त हुन्छ ।
l भिटामिन डी तथा ईको प्रमुख स्रोत अण्डापूरक प्रोटिन भएको खाद्यान्न वस्तु हो । अण्डाको पहेंलो भागबाट प्रशस्त भिटामिन डी प्राप्त हुने भएकाले जाडो मौसममा लाग्ने खोकी तथा छातीको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ । तरकारीको तातो सुप, मसरुम सुप, चिकेन सुप, गोलभेंडा, गेडागुडीको झोल आदि शरीरलाई न्यानो बनाउने खानेकुरा हुन् । यसका साथै जाडो मौसममा शरीरलाई तागत दिने खाना खानुपर्छ । तातो सुप तथा झोल खानेकुराले शरीरको तापक्रम सामान्य बनाउन सहयोग गर्नुका साथै स्फुर्तिसमेत बढाउँछ यसले रुघा लगाउने भाइरसको संक्रमणलाई निर्मूल पारेर न्यानो महसुस गराउँछ ।
l जाडो मौसममा अदुवा, लसुन, दालचिनी, बेसार, ल्वाङ, मरिच आदि मसला प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले शरीरलाई तातो राख्नुका साथै सर्दी एवं रुघालाई टाढा राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ । ज्वानोको रस, अदुवाको चिया, बेसार, दालचिनी, मह तथा ल्वाङ मनतातो पानीमा दैनिक बिहान वा बेलुकी प्रयोग गर्दा टन्सिल, रुघा, फ्लु, ज्वरो, निमोनियाँजस्ता जटिलताबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
l कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटिनयुक्त मकै, भटमास एवं बाजरालाई भुटेर प्रयोग गर्दा शरीरमा न्यानो महसुस हुन्छ । राजमा, छोला–भटुरा, चना, मटर, क्वाँटी आदिको स्वादले जाडो मौसमलाई थप विशेष बनाउँछन् ।
l बेलुकीपख १ गिलास मनतातो दूध, ३–४ दाना काजु, हाडे बदाममा १ चम्चा मह मिसाएर पिउँदा मीठो निद्रा लाग्छ । यसले शरीरलाई न्यानो बनाउनुका साथै जाडोयामको लामो रातमा रगतमा पोषण तत्वको कमी हुन दिँदैन । फलस्वरूप शरीरको तापक्रम सन्तुलित रहन्छ । हाडजोर्नीका बिरामीलाई जाडोयाममा खुट्टा–घुँडा दुख्ने समस्याले बढी सताउँछ । यस्ता बिरामीले क्याल्सियमले भरिपूर्ण दूध, चीज, साल्मोन, प्राउन, अण्डा आदि खानु उपयुक्त हुन्छ ।
l सबैले आफ्नो दैनिक मेनुमा माथिका खानेकुरा समावेश गर्नसके शरीरको तापक्रम सन्तुलित राख्न मद्दत गर्नुका साथै नयाँ ऊर्जा एवं जोस थपिन्छ ।
तपाईलाई यो सामाग्री कस्तो लाग्यो ?
सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भए कमेन्टमा लेख्नुहोस् / मन परेमा जनहितका लागि शेयर गर्नुहोला -धन्यवाद